Minitube ngwa iji kporie YouTube na desktọọpụ gị | Site na Linux
Minitube ngwa iji kporie YouTube na desktọọpụ gị
Ke ibuotikọ emi anyị ga-ahụ ngwa ga-enyere anyị aka ile vidio vidio na desktọọpụ gị. Minitube bụ ngwa nwere ezigbo njirimara eserese eserese nke na-enye ha ohere itinye mkpụrụokwu okwu na nyocha ọchụchọ iji chọọ vidiyo na YouTube.
Ọzọkwa ị nwere ike igosi anyị ndepụta site na ebe ị nwere ike ịhọrọ vidiyo ịchọrọ. Ihe na-adọrọ mmasị banyere Mintube bụ na eserese eserese na-enye anyị ohere inwe ike ịnụ ụtọ YouTube na-enweghị mkpa ịwụnye ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ ọkụ.
Ihe omume a bụ nwa amaala YouTube nke na-anwa ịnye ahụmịhe TV maka onye ọrụ kama ịdekọ ntanetị websaịtị YouTube.
Nke kachasị mma bụ na Ọ naghị achọ Flash Player ka ọ rụọ ọrụ, ya bụ, ọ na-erepịa obere CPU ma chekwaa batrị laptọọpụ gị.
Ozugbo eburu listi ọkpụkpọ, ha nwere ike ịnụ ụtọ ya dịka ọ dị, ma ọ bụ mezie ọchụchọ ha site na ịpị akara ngosi iko ma ọ bụ iji ụzọ mkpirisi keyboard Ctrl + E.
Nke a na - enye gị ohere ịhazi nsonaazụ gị site na mkpa, ụbọchị, ọnụ ọgụgụ, ma ọ bụ ọkwá, ma kọwaa afọ ole nsonaazụ nwere ike ịbụ, yana ogologo oge ya na ogo ya.
Mgbe ị na-ele ndepụta ọkpụkpọ, ọ dị mfe ịhazigharị vidiyo site na ịdọrọ na idobe, ma ọ bụ jiri ụzọ mkpirisi keyboard.
Nhọrọ ndị ọzọ gụnyere ịchọ vidiyo metụtara ọkpụkpọ, imeghe vidiyo na YouTube na nhọrọ pụrụ iche akpọrọ "chọta akụkụ vidiyo", nke nwere ike inyere gị aka ịchọta akụkụ dị iche iche nke vidiyo ndị kewara n'ime ngalaba dị iche iche.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọkpụkpọ vidiyo, ihe ọkpụkpọ ihuenyo zuru oke nke Minitube anaghị agụnye njikwa ọ bụla.
1 Wụnye Minitube na Linux?
1.1 Wụnye Minitube na RHEL, CentOS, Fedora na nkwekọrịta
1.2 Arch Linuxy nkwekọrịta
Wụnye Minitube na Linux?
Iji wụnye Minitube na Ubuntu, Debian na nkwekọrịta, ị ga-emerịrị ihe ndị a.
Anyị ga-emeghe ọnụ na ya ka anyị ga-eme iwu na-esote nke anyị ga-ebudata ngwugwu ụgwọ nke ngwa ahụ, ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ nke sistemụ 32-bit, a ga-ebudata ngwugwu ahụ bụ ihe ndị a:
Ugbu a Ọ bụrụ na usoro gị bụ 64-bit, ị kwesịrị ibudata ngwugwu na-esonụ site na enyemaka nke iwu a:
Ozugbo ebudatara ngwugwu ahụ, anyị ga-etinye ya ugbu a site n'enyemaka nke njikwa ngwugwu kachasị amasị anyị ma ọ bụ site na njedebe na iwu na-esonụ:
Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ịdabere na anyị, anyị ga-emerịrị nke a na njedebe:
Wụnye Minitube na RHEL, CentOS, Fedora na nkwekọrịta
N'ihe banyere usoro ndị nwere nkwado maka nchịkọta RPM, anyị nwere ike ịkwalite ntinye nke ngwá ọrụ a site na enyemaka nke ngwugwu rpm.
Ka ọ were ha ga-ebudata ngwugwu ahụ dị ka usoro nke usoro ha. Ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ nke sistemụ 32-bit, ngwugwu ha kwesịrị ibudata bụ ihe ndị a:
Si bụ ndị ọrụ nke usoro 64-bit, ngwugwu ibudata bụ ihe ndị a:
Mgbe ibudata ngwugwu ahụ, ugbu a, anyị ga-aga n'ihu nwụnye na iwu na-esonụ, ọ bụrụ na imegheSUSE iwu a ị ga-eji.
Maka nkesa ndị ọzọ wụnye na:
Ma ọ bụ na:
Arch Linuxy nkwekọrịta
N'ikpeazụ, maka ndị bụ ndị ọrụ Linux Arch, Manjaro Linux, Antergos ma ọ bụ usoro Arch Linux ọ bụla, anyị nwere ike iwunye ngwa a ozugbo site na nchekwa AUR.
Naanị nke ahụ ha ga-enwerịrị nchekwa AUR gbakwunyere na pacman.conf gi file ma nwee ọkachamara iji nwee ike ịwụnye nchịkọta AUR na sistemụ gị.
Ọ bụrụ na ịnweghị, ị nwere ike iji nke ahụ Ana m akwado gị na ọkwa ọzọ.
Ugbu a nanị ị ga-emepe ọnụ ma gbue iwu a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Minitube ngwa iji kporie YouTube na desktọọpụ gị
Enwere m Q4OS, ọ na-ahapụ m ka m wụnye, ọ na-emezu mana ọ naghị egosi ihe ọ bụla m tinyere na igbe ọchụchọ
Zaghachi to edilaq
Enwere m Q4OS, ọ na-awụnye ma na-agba ya, mana ọ naghị egosi nsonaazụ ọ bụla mgbe m tinyere ihe na igbe ederede
Debian 9.6 Stretch rutere na ọtụtụ narị mmelite
Etu esi etinye Java na nkesa Linux dị iche iche?